Hanti-dhawraha Qaranka oo sheegay inaysan Golaha Wasiiradu xilka ka qaadi karin | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Hanti-dhawraha Qaranka oo sheegay inaysan Golaha Wasiiradu xilka ka qaadi karin
Muqdisho (Radio Gaalkacyo):- Golaha Wasiirada ayaa kualnkoodii xalay ay yeesheen waxay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Hantidhawrihii Qaranka Soomaaliya.
Dr. Nuur Faarax oo ah Hanti-dhawraha Qaranka ayaa sheegay in aysan Golaha Wasiiradu sharci ahaan aysan xilka isaga ka qaadi karin xaqna aysan u lahayn.
Hantidhawruhu wuxuu sheegay Dastuurka inuu yahay kan mudan in lagu dhaqmo isagoona sheegay in sida sharciga ah aysan Gole Wasiiro isaga xil ka qaadi karin, wuxuuna dhiirigeliyay in sharciga la ilaaliyo.
Dr. Nuur Faarax ayaa xil ka qaadistiisa Golaha Wasiiradu u aaneynayaan dilkii Wasiirkii Hawlaha Guud ee Soomaaliya oo la sheegay in ay dileen ilaalada Hantidhawraha, balse wuxuu Hantidhawruhu sheegay in xil ka qaadistiisa ay tahay mid huwan waji kale.
Hantidhawraha Qaranka ayaa sheegay in xil ka qaadista Golaha Wasiiradu ay ku dhawaaqeen uu u aaneynayo kadib markii uu ka hor yimid wadooyin aan sharci ahayn oo loo maray maamulida dhaqaalaha dalka iyo khaladaad ka yimid Raysalwasaaraha iyo Wasiirada qaarkood oo uu Hantidhawruhu ku cel celiyay inaysan raali ka noqoneyn musuqmaasuq.
Golaha Baarlamaanka oo ah sharci dajiyaasha dalka ayaa laga dhur sugayaa waxay ka yiraahdaan Hantidhawraha Qaranka iyo Golaha Wasiirada oo iyagu ku muransan arinta xil ka qaadista.